Ashin Wirathu – “ဝီရသူ သဘောထား ၇/၇၄” | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်တောမြို့နယ်မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်အရေးခင်းနှင့် ပက်သက်၍ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ.အရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)၏ သဘောထားအမှန်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ်ပါ သည်။
(နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် အီရန်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများ၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်တွင် မူဆလင်ဘာသာဝင်များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် မျိုးတုံးနေပြီဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှ အများသူငှာ ပြည်သူတို့ လေးစား ယုံကြည်မှု ရှိသူ လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မိမိဂုဏ်သိက္ခာ အမည်နာမကို တာဝန်ယူ ဖော်ထုတ်ပြီး သဘောထားပြောဆိုချက်တို့ကိုလည်း သိရှိနိုင်စေရန် အရှင်ဝီရသူ၏ သဘောထားကို မူရင်းအတိုင်း မိုးမခမီဒီယာက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ မိမိတို့၏ သဘောထားမှာလည်း ဒေသဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အဓိကရုဏ်း၊ ပဋိပက္ခကြီးအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ ရခိုင်ဒေသခံများ၊ နယ်စပ်ဒေသက ဘင်ဂါလီလူမျိုးစုများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိဒ္ဒူဘာသာ၊ မူဆလင်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ အားလုံး ထိခိုက်ခံစားနေရသော အရေးအခင်းတခု အဖြစ် မြင်ပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ စကားရပ် အသုံးအနှုန်းကို မိုးမခမီဒီယာက လက်ခံခြင်းမရှိပါ။ မိုးမခမီဒီယာ)
Tags: ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင်, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ
5 Responses to Ashin Wirathu – “ဝီရသူ သဘောထား ၇/၇၄”
timothy on July 22, 2012 at 5:47 am
According to the Buddha way please try to kind over all ethnics. Please don’t separate over mankind. Religion is for human being who believe ,this is personal choice. All religions come from different countries. here are no made in Burma religion. Please be organize for peace and calm over all faiths.
pn wara on July 22, 2012 at 7:46 am
Jihad has two meanings, Greater Jihad refers toaperson’s internal spiritual struggle to be comeabetter human being, Smaller Jihad refers to acts of combat for purpose of defending one’s community and faith, (Ben laden, Islam and American’s new War on Terrorism by As’ad Abukhalil, 2002, open media)
ဂျီဟတ် နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဖတ်ဖူးတာလေး မျှဝေလိုက်တာပါ. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်-၀ီရသူ သဘောထားသည် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံပြီး ယုတ္တိရှိသောကြောင့် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံ အားပေးပါသည်။ အားလုံးသော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သတိ ၀ီရိယ -စည်းကမ်းရှိကြဘို့အရေးကြီးကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အဖြစ်အပျက်က မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။
အမှန်တ၇ား on July 22, 2012 at 8:08 am
မိုမခအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ် ဒါကသေးသေးလေးမဟုတ်ပါဘူး အလိုအမှန်တရားကိုတင်ပြပေးတဲ့အတွက် တချိန်ချိန်မှာ ကြီးကြယ်ခမ်းနားတဲ့ ဆုလာဒ်ကိုရရှိမှာပါ
Zalatt on July 22, 2012 at 5:25 pm
တကယ့်ပြောင်မြောက်တဲ့ သမိုင်းတွင်မည့် သဘောထားပါ၊ လေးစားလှပါပေတယ်၊
thein tun on July 22, 2012 at 8:34 pm
ဖိုးထက်ရဲ.ခံတွင်းတွေ.သောမိတ်ဆွေ ဆိုတဲ.ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး မိုးမခ ကိုတင်းနေတာ ခုဒီအရှင်ဝီရသူကိုထည်.ပေးတဲ.တွက် ကျေးဇူးပါ မှန်တာတွေပဲတင်ပြနိုင်ပါစေ